Dagaalo dhex maray ciidamada xoraynata ogaadeenya iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya.
Shacab u dhashay Ogaadeeniya oo lagu wax yeeleeyay Hargaysa.
ONLF iyo OLF oo si wadajira ah u canbaareeyay xukuummada Addis Ababa.
Wariyayaal caan ah oo la xidhxidhay.
Golaha Ammaanka oo Itoobiya canbaareeyay.
Xorriyada saxaafada ee Itoobiya oo laga dayriyay.
Araday Orama ah oo diiday in ay ku noqdaan Itoobiya.
15, 19, 21/4/04, Dagaalo ku dhex maray Ciidamada wadaniga xoraynta Ogaadeenya iyo ciidamada nacabka gumaysiga Itoobiya Tuulooyinka Dig, Ananu iyo meelo kale oo agagaarkaa aan ka faogayn ayaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 22 Askari oo ay ku jiraan Sadex sargaal mid ka mid ah lagu magacaabi jiray Captan Qaramo, waxaana dagaaladaas lagaga dhawacay ciidamada wayaanaha in ka badan 28 askari.
Dagaaladaas oo isugu jiray Mir, Gaadmo iyo isku dhac ayaa ciidamada cadawga jab laxaadle loogu gaystay waxaana dagaaladas lagaga gumay ciidamada wayaanaha Hal Baabuur oo kuwa ciidamada ahaa, waxaana lagaga furtay hub yar yar iyo saanad kale.
27/4/04, Car-caraar oo Gobolka Qoraxay ka tirsan, dagaal ku dhex maray ciidamada xaq u dirirka xoreeynta Ogaadeenya iyo ciidamada dulmiga waheshada ee gumaysiga Itoobiya, ayaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 askari oo kale.
28/4/04 Dagaal ku dhexmaray ciidamada geesiyiinta xoraynata Ogaadeenya iyo ciidamada doolka ee gumaysiga Itoobiya Tuulada Gaba-gabo oo gobalka Qoraxay ka tirsan, ayaa waxa ciidanada dacdaraysan ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 9 Askari oo kale.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Hargaysa ayaa sheegaya in dad u dhashay Ogaadeenya lagu wax yeeleeyay magaaladaas.Waxaa budhadh iyo dhagaxyo lala dhacay dad safaro ahaa maalinta ay bisha May kowda ahayd, iyadoo dadka gacan qaadkaas gaystay ay ka mid ahaayeen koox ka tirsan booliska magaalada Harygaysa, kuwaasoo sidoo kale hortooda lagu jidh-dilay dad rayad ah oo dambiga kaliya ee ay galeen uu yahay
inay ka yimaadeen dalka Ogadenya, waxaase dhaawac halis ah loo geystay nin dillaal xoolaha ahaa iyo mid kale oo isaguna Kaari baabuurta rara ahaa oo tooriyo lagu doox-dooxay.
Talaabadan ay dadku ku wax yeeleeynayaan dadka safarada ah ayaa la sheegayaa in ay abaabulayaan Maamulka gobolada waqooyi, kuwaas oo dadka ku guubaabinaya in hantidooda la dhoco, lana wax yeeleeyo Dadka u dhashay Ogaadeenya ee gobolada waqooyi ku sugan.
Shacabka ka soo jeeda beelaha daga Oodweyne iyo Hawd ayaa ka soo horjeeda in la dhaco ama la waxyeeleeyo safarada Ogadenya ee Hargeysa ku sugan kuwaasoo ka digay saamaynta xun ee ka dhalan karta talaabo noocaas ah haddii la qaado, isla markaana waxay ku wargaliyeen safarada Ogadeniya ka yimid inay digtoonaadan isna uruuriyaan oo gobolada waqooyi ka baxaan.
Jabhadaha ONLF iyo OLF ayaa bayaan wadajir ah toddobaadkan ka soo saaray dhibaatooyinka ay xukuumadda Addis Ababa ku hayso shucuubta ku hoos nool ee ay ka midka yihiin soomaalida Ogadenya iyo Oromada.
Bayaankan waxay Jabahaduhu ku sheegeen in dunidu ay maanta gaadhay heer ay iska kaashato dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro argagixisada iyo xukuumadaha aan xilkaska ahayn. Waxayna tilmaameen in Itoobiya guud ahaan, gaar ahaan Ogadenya iyo Oromiya ay yihiin meelaha adduunka ugu dhimasho badan.
Jabhaduhu waxay bayaankooda ku sheegeen in dadwaynaha Ogadenya iyo Oromiya u dhashay ay xukuumadda Itoobiya argagixiso wayn ku hayso, isla markaana aanuu jirin qof gurigiisa ama meel kale ammaan ku dareemaya, iyadoo sababta kaliya ee loo dilayo ama loo xidhayo ay tahay qofka asalkiisa.
Jabhadaha ONLF iyo OLF waxay canbaareeyeen denbiyadaas bani�aadamnimada ka baxsan ee maamulka TPLF uu ka galo dadwaynaha, waxayna beesha caalamka ugu baaqeen inay Itoobiya ku cadaadiyaan sidii ay uga waantoobi lahayd falalka bani�aadamnimada ka dhanka ah ee ay caadaysatay.
Dalalka deeqda bixiyana waxay kula taliyeen inay u dhabba-galaan meelaha ay xukuumadda Itoobiya u isticmaasho kaalmooyinka kala duwan ee ay sida hagar la�aanta ah u siinayaan.
Wariyaha walkaaladda wararka Ogadeniya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in la xidhay 2 wariye oo aad caan u ahaa oo u dhashay qoomiyda Oromoda. Wariyayaashan waxaa lagu eedeeyay inay ka denbeeyeen qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa.
Labadan wariye ee xabsiga loo taxaabay waxay kala ahaayeen;
Shifaraw Hinsermu, oo ahaa tafatiraha iyo soo diyaariyaha barnaamijka dhaqanka ee TV-iga Oromoda iyo Dhnbesse Wakjira, oo ahaa soo saare sare iyo madaxa wararka. Labadan wariye ayaa waxay Tilefeshinka Itoobiya u shaqyn jireen mudo ka badan 10 sano.
Warku wuxuu kaloo intaas raaciyay in wariyaashan ay hadda ku xidhan yihiin xabsiga loo yaqaan Meakalawi, waxaana aad ugu walbahaarsan qoysaskoodii iyo shaqaalihii ay wada shaqyn jireen, kuwaasoo ka baqanayaan inay nabadsugida Itoobiya nimankaas jidhdil u gaysato amabase ay si qarsoodi ah nafta uga qaadaan.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in diidmada ay Itoobiya diidday go�aankii Qaramada Midoobey ee ku saabsanaa xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritereya ay khatar gelinayso xaaladda nabadgelyo ee gobolka.
Bayaan uu Golaha Ammaanku talaadadii soo saaray wuxuu labada dal ee Itoobiya iyo Eritereya ku guubaabiyay inay ka shaqeeyaan sidii horumar looga gaadhi lahaa qorshaha nabadda ee lagu soo afjarayo khilaafka xuduudeed ee u dhexeeya.
Bayaankan oo uu akhriyay safiirka Pakistan oo hadda haya madaxtinimada Golaha Ammaanka, wuxuu shaki wayn ka muujiyay mustaqbalka qorshaha nabadeed ee Qaramada Midoobey ay ku joogto xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Eritereya.
Xorriyada saxaafada ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay ku sugan tahay xaalad aad uga liidata sidii ay ahaan jirtay markii uu xukunka haystay Mingiste Xayle Maryem, sidaas waxaa sheegay khubarada saxaafada iyo qareennada oo ka hadlayay Maalinta Saxaafada Xorta ah ee Adduunka oo ku aaddanayd isniintii la soo dhaafay.
Markii ay xukuumadani dalka qabsatay waxay xorriyada saxaafadu isu beddashay waraaqo qoran oo lagu khaldo dalalka deeqda bixiya, si kaalmo loogaga helo, sidaas waxaa yidhi Assefa Chewaka, oo ah khabiir ku takhasusay is-gaadhsiinta.
Wuxuu kaloo intaas ku daray; �Waxay xukuumadda Itoobiya sharciga saxaafada u isticmaashaa inay ku majara-habaabiso dalalka deeqda bixiya iyo hay�adaha lacagta ee adduunka�.
Aradaydii Oramada oo diiday in ay ku noqdaan Itoobiya.
Ardeydii Ormada ee todobaadyadan ku soo qul-qulayey Magaalada Mooyaale ee wadanka Kenya ayaa diiday in ay si ikhtiyaar ah ugu noqdaan wadanka Itoobiya, kadib markii hay'ada UNHCR u soo jeedisay codsi ah in ay noqdaan, Sidaana waxaa sheegtay maalintii Khamaiista idaacada KBC ee Magaalada Nairobi.
Ardeydan ayaa ka cawdey xasuuqa iyo xadgudubka ay ciidamada dawladda Itoobiya ku hayso qoomiyada ay ka soo jeedaan ee Oromada.
Ardeydaydan ayaa hada lagu hayaa iskuul 7 km u jira Magaalada Mooyaale, halkaas oo saraakiisha ka socota UNCHR ay baaritaan kuhayaan, iyaga oo ka baaraan degaya talaabooyinka ay ardeydan wax loogu qabanayo.